जिल्लास्तरीय तेक्वान्दोमा कठार पहिलो – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
चितवन, ३२ जेठ । चितवनको भरतपुरमा आयोजना गरिएको १८औँ जिल्लास्तरीय खुला तेक्वान्दो प्रतियोगितामा कठार तेक्वान्दो डोजाङ पहिलो भएको छ । कठार तेक्वान्दो डोजाङ सात स्वर्णसहित पहिलो भएको हो ।
सो प्रतियोगितामा सात स्वर्णसहित नै कृष्णपुर तेक्वान्दो डोजाङ दोस्रो भएको छ । त्यस्तै, प्रतियोगितामा पाँच स्वर्णसहित माडी तेक्वान्दो डोजाङ तेस्रो भएको छ । प्रतियोगितामा समूह पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हने डोजाङलाई ट्रफी प्रदान गरिएको छ भने खेलाडीहरुलाई मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
सोही प्रतियोगितामा पुरुष तर्फ होप हाउस तेक्वान्दो डोजाङका पावल क्षेत्री उत्कृष्ट खेलाडी तथा महिला तर्फ आदर्श स्कुल तेक्वान्दो डोजाङकी दुर्गा राई उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । भरतपुर ११ मा रहेको नारायणी इङ्लिस पब्लिक सकेण्डरी स्कुलको सहयोगमा बुद्ध तेक्वान्दो डोजाङले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ तौल समूहमा पुम्से तथा फाइट गराइएको थियो ।
पुरुषतर्फ २० देखि ५१ किलो तौल समूहसम्म र महिला तर्फ २२ देखि ५७ किलो समूहसम्म प्रतिस्पर्धा गराइएको राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ चितवनका अध्यक्ष विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए । सो प्रतियोगितामा १९ वटा डोजाङका एक सय ९२ जना खेलाडी सहभागी भएका श्रेष्ठले बताए । २५ वटा स्वर्ण, २५ वटा रजत र ५० वटा कास्यपदकका लागि खेलाडीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
बुद्ध तेक्वान्दो डोजाङका अध्यक्ष दिवस गुरुङको अध्यक्षतामा भएको प्रतियोगिताको समापन समारोहमा मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष परमेश्वर खनाल प्रमुख अतिथि रहेका थियो । प्रतियोगितामा नारायणी इङ्लिस पब्लिक सकेण्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल बेदराज न्यौपानेले खेलकुदको विकासका लागि विद्यालयले विभिन्न गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
पाँचौँ चितवन च्याम्पियनसिपः जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय विजयी
दलित लक्षित ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न गृहको निर्देशन ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
इनारमा डुबेर एक युवकको मृत्यु ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
झारफुक गर्ने क्रममा श्रीमती र छोरी हत्या गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
देशभर थप ६ सय ६६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
बिभिन्न बहाना बाजी गर्दै समयमै काम नगरेकोमा आपत्ति ! ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
फगानिस्तानमा परिवारका अन्य सदस्यको भोक मेट्न छोरी बेचेको खुलासा ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
फेसबुकले कमायो तीन महिनामा नौ अर्ब डलर नाफा ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
जनपत्रकार संगठन नेपाल म्याग्दीको अध्यक्षमा बादल शाही ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
आजको मौसमः देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
बाढी पहिरो तथा डुबान प्रभावित बाहेकका क्षेत्रमा आज एमालेको पालिका अधिवेशन ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तान १ सय ३० रनले विजयी ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा डा. घिमिरे नियुक्त। ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१४